प्रधानमन्त्री देउवालाई कार्यदलले बुझाएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा के छ ? (पूर्णपाठ) - News 88 Post
प्रधानमन्त्री देउवालाई कार्यदलले बुझाएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा के छ ? (पूर्णपाठ)
August 6, 2021 N88LeaveaComment on प्रधानमन्त्री देउवालाई कार्यदलले बुझाएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा के छ ? (पूर्णपाठ)
काठमाडौँ । सत्ताररूढ गठबन्धनको कार्यदलले तयार पारेको सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रतिवेदन आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ।
त्यसका लागि अहिले कार्यदलका सदस्यहरू प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका छन्। प्रतिवेदनमा सरकारका योजना, काम र प्राथमिकताका विषय समेटिएका छन्। प्रधानमन्त्रीपछि गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई पनि प्रतिवेदन बुझाइने कार्यदलले जनाएको छ।
गठबन्धनमा आबद्ध पार्टीका नेता, अर्थविद्, कानुनविदलगायत जानकारलगायतका सुझावसमेत समेटेर सबैको अपनत्व हुनेगरी प्रतिवेदन तयार पारिएको कार्यदलका सदस्यहरूले दाबी गरेका छन्।
काँग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरु सम्मिलित ७ सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको ‘संयुक्त सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम’ मा सरकारका प्राथमिकताहरु निर्धारण गरिएको छ ।
प्रेम आले भन्छन्, ‘माधव नेपाल कमाण्डर हो, कमाण्डरलाई मैदानमा एक्लै छाडेर सिपाही भाग्न मिल्दैन’
आजवाट निषेधाज्ञामा थप कडाई, थपिए यस्ता नयाँ नियम
पाठेघरको क्यान्सर कसरी पत्ता लगाउने ?
November 15, 2021 N88